'ဓာတ်ရှင်ဇာတ်လိုက်' ပန်းချီပြပွဲတွင် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ဖြူမည်းခေတ်နှင့် ဆေးရောင်စုံခေတ်ဦးက - Yangon Media Group
ကောလိပ် ဂျင်နေဝင်း၊ သုမောင်၊ ကျော်ဟိန်း၊ ခင်သန်းနုအစရှိသည့် မြန်မာ့ရုပ်ရှင် အဖြူ၊ အမည်း ခေတ်နှင့် ဆေးရောင်စုံခေတ်ဦးပိုင်းက သရုပ်ဆောင်များ၊ လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်များ၏ ပုံတူပန်းချီကား ၅၁ ကားကို ‘ဓာတ်ရှင်ဇာတ်လိုက်’ ပန်းချီပြပွဲတွင် ပြသထားကြောင်း သိရသည်။ ယင်းပုံတူပန်းချီကားများ ရောင်းရငွေများကို ယနေ့ခေတ် လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်များကို လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
”လူကြမ်းသရုပ်ဆောင်တွေကို စာနာတဲ့အနေနဲ့ပြပွဲလေးလုပ် ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးအံ့ကျော် ပုံတူကားလေးဆွဲရင်း ဒီစိတ်ကူး ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆင်မ ပြေတဲ့လူကြမ်းတွေကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အထောက်အပံ့ရဖို့လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပန်းချီ ကိုဘစည်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ဧပြီ ၂၈ ရက်တွင်ပြောသည်။ ပြပွဲကို ဧပြီ ၂၇ ရက်မှ ၃ဝ ရက်အထိ ၃၅ လမ်းအလယ် ဘလောက် Moon Art Gallery ၌ကျင်းပလျက်ရှိပြီး ရုပ်ရှင်ချစ် ပြည်သူများအနေဖြင့် လာရောက် ကြည့်ရှုအားပေးစေလိုကြောင်းသိရသည်။
”ပြပွဲမှာပထမဆုံးသရုပ် ဆောင်ဖြစ်တဲ့ဦးဘပုတို့၊ နာမည် ကျော်မင်းသမီး ဝင်းမင်းသန်းတို့ ကအစ ဖိုးပါကြီး၊ ရွှေဘ၊ ဦး ကျောက်လုံး၊ ကျော်ဆွေ၊ ဝင်းဦး၊ ကျော်ဟိန်း၊ ခင်သန်းနု၊ ကောလိပ်ဂျင်နေဝင်း၊ အံ့ကျော်၊ သု မောင်စသဖြင့် အဖြူအမည်း ခေတ်ကတကယ့်နာမည် ကျော် သရုပ်ဆောင်တွေ၊ ဆေးရောင် စုံခေတ်ကဆိုရင် ဒွေးပါပါတယ်။ ဒီပန်းချီကားတွေ ရောင်းရတဲ့ငွေ ၂ဝ ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုလူချောတို့ လူကြမ်းအဖွဲ့ကို လှူဒါန်းသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရုပ်ရှင်လောကသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပရိသတ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်အမှတ်တရ လာဝယ်ပြီး လှူဒါန်းစေချင်ပါတယ်”ဟု ၄င်းကပြောသည်။
ပြပွဲတွင်ပျဉ်းမနားမှ ပန်းချီ ဆရာမျိုးမော်ဦး၊ ကိုတာ၊ ဇော် မင်း၊ ဘစည်၊ လဂွန်းအိမ်၊ ကြိုင်ကြီးတို့၏လက်ရာများကို ပြသထားသည်။ ဧပြီလ၂၈ရ က်အထိ ပန်းချီကားနှစ်ကား ရောင်းချရပြီဖြစ် ကြောင်းနှင့် ပန်းချီကားတစ်ကားလျှင် ကျပ်နှစ်သိန်း၊ သုံးသိန်းနှင့် ငါးသိန်းတန်ဖိုးရှိပြီး ပုံမှန်ပန်း ချီကားဈေးနှုန်းများထက် လျှော့ချပြီး ရောင်းချပေးထားကြောင်း ပွဲစီစဉ်ပေးသူ မမြူပါးရ်ကပြောသည်။
မြန်မာ - ဂျပန် နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရရန်ပုံငွေ စုစုပေါင်းကျပ် ဘီလီယံ ၁၄ဝ ကျော်ဖြင့် နှလုံး၊ ဦးေ?
NLD ဒုတိယအကြိမ် လူငယ်ညီလာခံကို ကိုကိုးကျွန်း မြို့နယ်မှ အပ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း ၄၄ မြ??